Awunakuchukumisa oku nge-MC Hammer - Okunye
Awunakuchukumisa oku nge-MC Hammer
Umculo usekelwe ' Super Freak NguRick James. Le ngoma yayibetha ngo-1981, abaninzi abaphulaphuli abancinci babengazi ukuba ukubetha kwakusampuliwe. Ngokungaqhelekanga, uHammer wafumana amandla amakhulu kwi-MTV, owabeka ividiyo ngokujikeleza okunzima. Ngo-1981, nangona kunjalo, bala ukudlala 'Super Freak,' njengoko bengakhange badlale iividiyo ngamagcisa amnyama rhoqo. Mhlawumbi ukuba uRick James wayenxibe ibhulukhwe yeparachute kwaye wakhupha intshukumo yomdaniso 'waseTshayina, wayeya kufumana imbeko kwinethiwekhi.
UHammer wayeyinkwenkwana yeqela le-baseball le-Oakland A, kwaye wafumana igama elithi 'Hammer' kuba wayejongeka njengembali ye baseball uHank Aaron, owayesaziwa njengo 'Hammerin' Hank. ' Amanye amalungu e-A's ancedisa ngezemali umsebenzi we-rap kaHammer, kwaye wavela kwindawo yase-West Coast rap ngasekupheleni kweminyaka yama-80s, emele i-Oakland.
I-albhamu yakhe yokuqala, Yiva Amandla Am , wakhululwa kwileyibhile yakhe ezimeleyo ngo-1987 kwaye waqwalaselwa yiCapitol Records, eyamnika i- $ 750,000 kwangaphambili ukuba asayine. I-albhamu yakhe yokuqala yeCapitol, Masiqalise , wakhululwa ngo-1988 kwaye wenza umdlalo omncinci nge 'Turn This Mutha Out.'
'Awunakuyichukumisa le' yakhutshwa ngoJanuwari 1990 ngenyanga ngaphambi kwecwecwe lakhe lesithathu, Nceda u-Hammer, ungakhathazi u-Em . Ingoma yamthatha yaya kwelinye icala, ibandakanya izinto ezininzi zomculo wokudanisa kwaye kumenza athembeke kuluntu lwe-rap. Kwakuyi-pop hit enkulu, kwaye uHammer wabonakala kwi-MTV kunye neentlobo ezahlukeneyo zentetho ezenza ngeebhulukhwe ezihlekisayo ezaba luphawu lwentengiso kunye nomdaniso wakhe owahlukileyo. Ukhenketho lweentsuku ezingama-60 lulandelwe ngabantu abaninzi abadlala ngokulondoloza kunye nabaxhonyi, uninzi lwabo babengabahlobo bakudala abonwabileyo ukuba nenxaxheba kwimpumelelo yakhe yezemali (nangona abanye babekhalaza ngokuhlawulwa kancinci kunye neemeko zokusebenza ezinzima - uHammer wanyanzelisa ixesha elibekiweyo lokuhlawulisa kunye nezohlwayo zeempazamo) . Ukhenketho lwaluqhakazile kwaye lwaluduru, kwaye xa inkwenkwezi yeHammer yaphela, kwakungekho mali ishiyekileyo. Ulahle i-'MC 'kwaye wazama ukuzihlaziya kwakhona njenge-rap ye-gangsta, kodwa uphulukene nokuthembeka kwihlabathi le-rap kwaye akasabheneli kubaphulaphuli. Waba yinto ehlekisayo xa abaphulaphuli beqonda ukuba ayizukuthatha italente enkulu ukuthatha ingoma eyaziwayo kwiminyaka edlulileyo kunye ne-rap ngaphezulu kwesingqi (cinga ngeVanilla Ice).
Ngo-2005, uHammer wenza ukubonakala apho wayezimisele ukuzonwabisa ngaye, kubandakanya umboniso weTV yokwenyani kunye nentengiso apho aqhuba khona le ngoma phambi kwendlu ethe yahluthwa emva kwemizuzu eli-15 xa ithamsanqa lakhe liphelile. Ubuye wenza kumabhaso omculo we-MTV ngela xesha.
URick James uzame ukugcina abaxhasi ukuba bangasampuli umculo wakhe, benqabe naziphi na izicelo. NgokukaJames, amagqwetha akhe agunyazisa isampulu 'yeSuper Freak' ngaphandle kwemvume yakhe; wayiva malunga nayo xa umhlobo wakhe emxelela ngo 'U ngekhe uyichukumise le' kwaye ingoma yeza kwirediyo ababemamele emotweni. UJames wathi wayecaphukile, kodwa wavuya xa efumanisa ukuba yeyimalini ayenzayo kuye. Okwangoku, wathi ngekhe ayenze loo nto ukuba ebebuziwe.
UJames wayenenye inyama yenkomo: wayefuna ukudweliswa njengombhali wengoma ethi 'Awunakuyichukumisa le nto,' kwaye wamangalela uMC Hammer ngetyala. Ityala lagqitywa ngaphandle kwenkundla, noJames wadweliswa njengombhali-mbhali kwingoma kunye noHammer noAlonzo Miller, idiski eyabhala amazwi athile kwi 'Super Freak.'
Oku kuphumelele amabhaso eGrammy ka-1990 kwiNtsebenzo ePhambili yeSolo kunye neRhythm kunye neBlues yeNgoma yababhali uMC Hammer, uRick James kunye noAlonzo Miller.
I-Capitol Records yaqhuba umkhankaso wokuthengisa omtsha ukukhuthaza le ngoma. Bathumele ii-cassette ezingahlawulwayo zomculo kubantwana abayi-100,000 kunye neleta evela kuHammer ibacela ukuba babize iMTV kwaye bacele ividiyo. Icebo lasebenza, kwaye ividiyo yaba yeyona idlalwayo ngo-1990 kwinethiwekhi.
Ngaphandle kokudlala rhoqo kunye nentengiso enkulu, le ngoma ifike kwi # 8 kwiBillboard Hot 100. Kubonakala ngathi iyintlanzi ukuba iingoma ezinje ngo'Romeo 'nguDino kunye' Nite Out 'nguTyler Collins ziyakudlula, kodwa ke lo yayingunyaka ka1990. okwangoku ukufaka itekhnoloji ye-Soundscan yokulandela umkhondo wentengiso kunye ne-BDS yokubeka iliso kumdlalo womoya. Amanani entengiso athathwa kwiingxelo zevenkile erekhodiweyo kunye neenombolo zomoya ezivela kwizikhululo zikanomathotholo- kubonakala ngathi iivenkile kunye nezitishi bezingafuni ukuvuma ukuba ingoma iyathengisa okanye ibijikeleza kakhulu.
Ngokumangalisayo, iye yaya kwi # 1 kwitshathi ye-R & B, inika uMC Hammer eyona # yakhe kuphela kwityali. Umntu wakhe olandelayo ongatshatanga, isiciko esithi 'Ngaba umbonile,' wenza # 4 kwi-Hot 100, elandelwa ngu 'Thandaza,' owenza # 2.
U-Weird Al Yankovic wenze iparody yale ngoma ibizwa 'Andikwazi Ukubukela Le,' emalunga neenkqubo ezimbi zeTV, 'ezimnandi njengokubukela ipeyinti yomile.'
UMC Hammer urekhode le ngoma kwii studio zeCapitol Records eHollywood, kwindawo enye noFrank Sinatra kunye noNat King Cole benza uninzi lwabo olurekhodiweyo.
'Awunakuyichukumisa le' lukhetho oludumileyo lweebhlokhsi ezisezantsi; isetyenziswe kubini Abaguquleli Iimuvi, Ukukhula okuphezulu 2 (2013), Iingelosi zikaCharlie: I-Throttle epheleleyo (2003) kunye Kung Pow: Ngenisa inqindi (2002). Ezinye iifilimu zokuyisebenzisa zibandakanya:
Ubushushu 7 (2015)
Iindudumo zeTropic (2008)
Indoda yeNdlu (2005)
Ityala likaShark (2004)
Amantshontsho amhlophe (2004)
Inkwenkwe yeBubble (2001)
Kwicala leTV, yabetha i-trifecta ye- IiSimpson ('Inkwenkwezi iyatshisa' - 1995), Umfana wosapho (* E Peterbus one '- 2000) kunye iphaki yasemazantsi ('IiNinjas ezimbi' - 2015). Ikwabonisa ngeziqendu ze Glee ('Udumo olubi' - 2010) kunye Ngaphezulu ('Intuthuzelo yaseMzantsi' - 2012).
Oku kusetyenziswa kwi-2020 Intengiso yeSuper Bowl yeeCheetos Popcorn . Endaweni, umntu uphuma enze nawuphi na umsebenzi ngokutya imveliso, eshiya intsalela yeorenji ezandleni zakhe - akanakuchukumisa nantoni na kuloo meko. Ihammer iyavela kuyo yonke indawo.
lee ann rimes ndihlala njani lyrics
ungaphuphi kuphelile ngamazwi intsingiselo
ngubani ovuma andifuni ukulahlekelwa luthando lwakho ngokuhlwanje
Ibhongo egameni lothando u2
oh ukuba ndiyakubamba
Kufuneka kubekho indlela yokuphuma apha yatsho isiqhulo kwisela
patrick swayze ufana nomoya